ကျောင်းသားများ & မိဘများအဘို့ MBA ဘွဲ့ရ Programs ကို & အဆင့်
by ကရင် Schweitzer
တစ်ဦးအနိုင်ရရှိမှုက MBA စာစီစာကုံးရေးရန်လုပ်နည်း
အများစုမှာဘွဲ့ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အနည်းဆုံး MBA ဘွဲ့ရအက်ဆေးတင်ပြရန်လျှောက်ထားလိုအပ်သည်။ အဆင့်လက်ခံရေးကော်မီတီများကတခြားအတူစာစီစာကုံးကိုအသုံးပြုဖို့ လျှောက်လွှာအစိတ်အပိုင်းများ သင်သည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြောငျးအတှကျကောငျးတမထိုက်မတန်များမှာဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ရန်။ တစ်ဦးကကောင်းစွာ-တိကျမ်းစာ၌လာသည် MBA ဘွဲ့ရအက်ဆေးလက်ခံမှုသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်အခြားလျှောက်ထားသူတို့တွင်အထွက်မတ်တပ်ရပ်ကူညီနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် MBA ဘွဲ့ရအက်ဆေးခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောနေတယ်ဆိုရင်, သင်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ခွင့်ပြုမဟာဗျူဟာမြောက်ရွေးချယ်မှုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်, အတားအဆီးကိုကျော်လွှားရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုရည်ညွှန်းပြသထားတဲ့အက်ဆေး, ဒါမှမဟုတ်ရှင်းလင်းစွာသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်တစ်ခုအက်ဆေးပြသသည့်စာစီစာကုံးပါဝင်နိုင်ပါသည်။
များသောအားဖြင့်နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံး - အခွင့်အလမ်းတွေကို, သင်မျိုးစုံအက်ဆေးများတင်သွင်းဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်နေကြသည်။ သင်တို့သည်လည်းတစ်ခုတင်သွင်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိစေခြင်းငှါ "optional ကိုစာစီစာကုံး။ " optional အက်ဆေးများသောအားဖြင့်သင်ချင်တယ်ဘာမှအကြောင်းကိုရေးသားနိုငျ, ဆိုလိုတာက guideline နှင့်ခေါင်းစဉ်အခမဲ့နေကြသည်။ အထဲက Find optional ကိုစာစီစာကုံးသုံးစွဲဖို့လာသောအခါ ။
သင်ရွေးချယ်မည်သို့ပင်ခေါင်းစဉ်, ခေါင်းစဉ်ကိုထောကျပံ့တစ်ခုသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မေးခွန်းကိုဖြေကြောင်းပုံပြင်များအတူတက်လာရန်သေချာစေပါ။ သင့်ရဲ့ MBA ဘွဲ့ရအက်ဆေးအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ဗဟိုကစားသမားသကဲ့သို့သင်တို့အင်္ဂါရပ်ရပါမည်။
ဘုံ MBA ဘွဲ့ရစာစီစာကုံးခေါင်းစဉ်များ
အများဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျောင်းများအပေါ်ရေးဖို့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်, သတိရပါ။ ခေါင်းစဉ်ကြောငျးမှကြောငျးသို့ကွဲပြားနိုငျသျောလညျးအမြားအပွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျောင်းမှ applications များပေါ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ကြောင့်အနည်းငယ်ဘုံအကြောင်းအရာများ / မေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်။ သူတို့ကပါဝင်သည်:
အဘယ်ကြောင့်သင် MBA ဘွဲ့ချင်ပါသလဲ?
MBA ဘွဲ့ရလျှောက်ထားစေသောအကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုမှာသူတို့မေးမေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်းမပေးပါ။ သင်သည်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အကြောင်းမေးနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် - မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် - ထိုစာစီစာကုံး၏အာရုံဖြစ်သင့်သည်။ မဟုတ်အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်အောင်မြင်မှု - သင်သည်သင်၏အောင်မြင်မှုများအကြောင်းကိုမေးသော်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြပြီးသင်ခန်းစာတွေကိုသင်လေ့လာသင်ယူကြအမှားတွေဆွေးနွေးရန်သင့်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်ကပ်နှင့်ခြုံဝန်းကျင်ရိုက်နှက်ရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင့်ရဲ့အက်ဆေးက start ကနေ finish ကိုတိုက်ရိုက်နှင့်ချွန်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာအစသင်အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ MBA ဘွဲ့အက်ဆေးဟာကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်ကော်မတီကရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်သတိရပါ။ သင်ကပုံပြင်၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သင့်သည်။
ကတက်မဖုံး - သငျ၏ဇာတ်လမ်းထောကျပံ့ပေးသင့်ပါတယ်ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦး, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကူညီခြင်းထဲကနေလေ့လာသင်ယူ, အခြားတွေရဲ့ရန်သူတစ်ဦးဦးကိုဖော်ပြရန်အဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့အဲဒီဖော်ပြထားတယ်။
ရှောင်ရှားရန်အခြား MBA ဘွဲ့ရအက်ဆေးအမှားရှုပါ။
မည်သည့်စာစီစာကုံးတာဝန်ကျတဲ့နေရာနှင့်ဝသကဲ့သို့, သင်ဂရုတစိုက်သင်ကပေးအပ်ထားတယ်ဆိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အာရုံစူးစိုက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်စုံစုံ - တနည်းကား, သင်တို့ဆီသို့တာဝန်ပေးအပ်မေးခွန်းဖြေပါ။ ဒါဟာစကားလုံးအရေအတွက်အာရုံစိုက်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ သငျသညျ 500-စကားလုံးအက်ဆေးတောင်းနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျ 500 ဤစကားသည်ရည်ရွယ်သင့်တယ်, ထက် 400 သို့မဟုတ် 600. တိုင်းစကားလုံးအရေအတွက်လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့စာစီစာကုံးလည်းဖတ်လို့လွယ်ခြင်းနှင့်စကားလုံးသည်သဒ္ဒါနည်းမှန်ကန်သောဖြစ်သင့်သည်။ တစ်ခုလုံးစာရွက်အမှားများကိုအခမဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ အထူးစက္ကူသို့မဟုတ်တစ်ရှုး font ကိုမသုံးပါနဲ့။ ရိုးရှင်းပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြောင့်ထားပါ။ အားလုံးအထက်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင့်ရဲ့ MBA ဘွဲ့ရစာစီစာကုံးရေးသားဖို့အချိန်အလုံအလောက်ပေး။
သင်တစ်ဦးနောက်ဆုံးနေ့တွေ့ဆုံရန်ကြောင့်သင်သည်ထိုသူတို့မှတဆင့် slop နှင့်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်ထက်လျော့နည်းမယ့်အရာတစ်ခုခုအတွက်ဖွင့်ရန်ရှိသည်ချင်ကြဘူး။
များစာရင်းကိုကြည့်ရှုပါ စာစီစာကုံးစတိုင်အကြံပေးချက်များ ။
သင်သည်သင်၏အက်ဆေးရေးသားခြင်းကိုစတင်ရှေ့၌သင်တို့ရည်မှန်းချက်များ, သင့်အောင်မြင်မှု, သင့်အားသာချက်, သင့်အားနည်းချက်များကို, etc, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အချိန်ကိုယူပါ။
သင်ကျောင်းရဲ့မစ်ရှင်, ယဉ်ကျေးမှု, ပရိုဂရမ်များနှင့်ချဉ်းကပ်နည်းကောင်းတစ်ခုဥာဏ်ရှိသည်သည်အထိကျောင်းသုတေသန။
အရမ်းပညာသင်နှစ်ဖြစ်မနေပါနဲ့ - MBA ဘွဲ့အက်ဆေးနေတဲ့အသုံးအနှုန်းစက္ကူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး packet ကိုဖြစ်ပါတယ်။
တိကျတဲ့အသေးစိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များကိုထောကျပံ့။
ဖန်တီးမှုဖြစ်မကြောက်ပါနှင့်။ သငျသညျယခု မှစ. ငါးနှစ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွေ့မြင်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့မေးလျှင်, နေတယ်ဆိုရင်, သင်စံနှုန်းအဖြေကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်အနာဂတ်တွင်ထိုနေ့ရက်သည်များအတွက်ဒိုင်ယာရီ entry ကိုရေးဖို့သို့မဟုတ်သင် grad ကျောင်းမှာအပြီးသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်အကြောင်းကိုသင်၏သားသမီးပြောပြနေဟန်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့စာစီစာကုံးစိတ်ဝင်စားဖို့လုပ်ပါ။ တချို့ကကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်များတူညီသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေကြားကျော်ကို 1000 စာစီစာကုံးဖတ်ပါ။ အဆိုပါမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အတူသူတို့ကိုချိတ်နှင့်သင့်အက်ဆေးလူတိုင်းအခြားသူရဲ့အကြားထွက်မတ်တပ်ရပ်စေတလျှောက်လုံးစိတ်ဝင်စားသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့။
MBA ဘွဲ့အက်ဆေးရေးသားခြင်းခေါင်းစဉ်အပေါ်မေးခွန်း / နထေိုဖြေဆိုဖို့ဖြစ်တယ်အခါ # 1 စိုးမိုးရေးဆိုတာသတိရပါ။ သင်သည်သင်၏အက်ဆေးပြီးဆုံးပါပြီအခါ, အနည်းဆုံးလူနှစ်ဦးကိုမေး proofread ကြောင့်နှင့်သင်ဖြေဆိုဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုခန့်မှန်း။
သူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ခန့်မှန်းမထားဘူးဆိုရင်, သင်အက်ဆေးပြန်လည်လည်ပတ်သင့်ပါတယ်နှင့်သင့် proofreaders အလွယ်တကူအက်ဆေးအကြောင်းကိုဖြစ်လို့ယူဆတယ်ဘာပြောပြနိုင်သည်အထိအာရုံညှိ။
ချီကာဂို Booth က MBA ပရိုဂရမ်များနှင့်အဆင့်လက်ခံရေး
အဆိုပါ M7 စီးပွားရေးကျောင်းများဘာတွေလဲ?
အဘယ်ကြောင့် MBA ဘွဲ့ရယူမလား?
ဘယ်လို Proofread ဖို့နဲ့ Edit ကောလိပ်အက်ဆေး
MIT က Sloan အစီအစဉ်များနှင့်အဆင့်လက်ခံရေး
MBA ဘွဲ့ရဘွဲ့ vs. က MS ဘွဲ့
အပိုင်းအချိန် MBA Programme တို့၏အကောင်းအဆိုး cons
ငှက်ပျောစစ်ပွဲများ: ဗိုလ်ချုပ် Smedley ဘတ္
အဆိုပါသည် Cretaceous - တက္ကသိုလ် Mass Extinction
အင်္ဂလိပ် Grammar ခုနှစ်, နှုတ်ကပတ်တော် '' Concord '' တစ်ဦးသဘောတူညီချက်မှပြောပြတယ်
ဘယ်လိုတစ်ခုမှာ Hajj များအတွက် Go ဖို့ပြင်ဆင်ပါပါသလား
တစ်ဦး Sulfuric Acid နှင့်သကြားတုံ့ပြန်မှုမှတဆင့် "Black ကမြွေ" Make လုပ်နည်း
တစ်ဦး Ophiolite ဆိုတာဘာလဲ
အန်း Hutchinson: ဘာသာရေး Dissident
"အလှအပနှင့်သားရဲ Sleeping" မှဟာသအမျိုးသမီး Monologue
ပွငျသစျထဲတွင် (နာခံဖို့) "Obéir" Conjugate လုပ်နည်း
Plesiosaurs နှင့် Pliosaurs - အဆိုပါပင်လယ်မြွေ
ရော့ခ် Cycle ပုံကြမ်း
Vitis vinifera: ပြည်တွင်းစပျစ်ပင်၏အ Origins
ကောလိပ် Valentine Day ကို Survival လမ်းညွှန်